> Resource > macruufka > macruufka 7 Data Recovery - Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Data ka dib markii macruufka 7 Hagaaji
"Iyada oo design ah-oo dhan cusub iyo muuqaalada-dhan cusub, macruufka 7 waa OS mobile ugu horumarsan dunida. In qaabka ugu horumarsan." Tani waa waxa Apple leeyahay oo ku saabsan arrimo 7 website-keeda rasmiga ah. Tan iyo markii la sii daayo version beta hore, dad badan ayaa la casriyeeyay ay iPhone, iPad ama iPod xiriiri in this macruufka gebi ahaan cusub 7. design cusub oo keliya ayaa soo jiitay tiro dad ah. Waxaa fiican in aad sii ula socdaan. Mararka qaarkood, fashion ka dhigi kara dadka rajo iyo xamaasad leh. Si kastaba ha ahaatee, marka dadka qaar waxa ay u ammaanayaa hawlaha weyn, qaar ka mid ah ka cabanayso badiyay dhammaan xogta ay iPhone, iPad ama iPod taabto ka dib markii lagu casriyeeyo si macruufka 7. Ma jiraa wax noo si looga fogaado ama u xaliyaan cabashada?
Sida iska cad, waxaa jira hab noocan oo kale ah. Ilaa iyo inta aad xoojiyaa xogta ku saabsan qalab aad, si fudud ayaad soo celin karaa Lugood. Haddii aad ku kaydsan xogta cusub ku macruufka iPhone, iPad ama iPod taabto oo ma doonayo in aan u overwrite, waxaad dooran kartaa in Macdan file gurmad si aad u hesho xogta ka soo. Inta aanad samayn, wuu xusuusan waayay inuu isku xiro iyo qalab aad u hagaagsan la Lugood on your computer, si ay u joojiyaan faylka gurmad ka updated.
Ka soo kabashada xogta lumay ka Lugood dib markii macruufka 7 update, aad u baahan tahay si aad u hesho macruufka 7 qalab kabashada xogta. Waxaa laga yaabaa in qalab badan oo kale ah, laakiin waa in aad ka heli mid aan wax yeelo xogta aad sida waxyeello, dusaya ama waxyaabo la mid ah. Waxaad ku isticmaali kartaa mid ka mid ah haddii aad qabto wax fikrad ah kama: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) .
Download software for free hoose si aad u leeyihiin isku day ah oo hadda.
Labada barnaamijyada kaa caawin kara inuu ka soo kabsado xogta lumay ee macruufka 7 qalabka, xiriirada aan loo eegayn aad laga badiyay, fariimaha, wac taariikhda, sawiro, videos, qoraalada, iyo in ka badan. Waxay ku siiyaan laba siyaabood oo loo sameeyo: kabsado gurmad Lugood iyo si toos ah soo kabsado qalabka macruufka. Next, waxaan kuu socon doonaa iyada oo sida inuu ka soo kabsado xogta lumay ka dib markii lagu casriyeeyo si macruufka 7 tallaabooyinka.
2 tallaabooyin si ay u qabtaan macruufka 7 kabashada xogta
Tallaabada 1. Dooro habka dib u soo kabashada iyo Macdan gurmad ah
Hadda, bal aynu isticmaali Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Windows) dib u soo ceshano xogta laga badiyay ka dib markii macruufka 7 hagaajinta. Sida ay u version Mac ah, waxa kale oo aad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose si aad qaadaan tallaabooyin la mid ah la version Mac ku saabsan Mac.
Marka hore, ordo barnaamijka on your computer. Waxaa jira laba hab hab kabashada muuqday dusheeda menu bilowga. Dooro mid ka mid ah la magacaabay ka soo kabsado Lugood ee kaabta File . Markaasay aad arki doonaa suuqa kala ah sida soo socota.
Barnaamijka waxaa si toos ah ka heli kartaan oo dhan Lugood gurmad files on your computer oo iyaga soo bandhigay in aad. Mid ka mid ah u qalab aad Dooro iyo guji Start Scan si ay u soo saaro.
Tallaabada 2. Ladnaansho xogta lumay ee macruufka aad 7 qalab
The iskaanka iyo soo saarida lagu dhamayn doonaa in dhowr ilbiriqsi. Waxaad ku eegaan kartaa ku dhowaad dhammaan waxyaabaha ku jira faylka gurmad ka dib. Iyaga Hubi mid ka dib markii mid ka mid ah adigoo gujinaya qaybaha dhinaca bidix suuqa kala iibsiga. Markaas calaamadee waxyaabaha aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Fiiro gaar ah: Haddii xogta la waayay si ay kor macruufka on qalab aad, aad soo jeediyay in dib u soo ceshano xogta lumay ay soo saarida gurmad Lugood ah. Kabashada Direct ka qalab ma shaqeyn doonto badan, sababtoo ah xogta lumay ayaa overwritten nidaamka files updated. Just leeyihiin isku day ah!